သက်တင်းထူး Special | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သက်တင်းထူး Special
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 6, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News | 11 comments
မြောက်ဥက္ကလာပ ဗလီတခုတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများအား ဆွမ်းကပ်ခဲ့ရာ မဝေးသော ကာလတွင် ဂေဇက်သဂျီး အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ်အိမ်၌ သံဃာတော်များအား ဖူးတွေ့ဖွယ်ရှိဂျောင်း ခန့်မှန်းနေကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည်များကို အတင်းအကြပ် မရွှေ့ရန် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားသော ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဂျီး ရန်ကုန် ထရေးဒါးဟိုတယ် ရုံးခန်းငှားခ မတတ်နိုင်တော့၍ ကန်အထုတ် ခံလိုက်ရသည်။
တိုင်းဒေသဂျီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ကား နံပါတ်ပြားများအား မြန်မာအက္ခရာမှ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာသို့ ပြောင်းလဲလိုက်ရာ ဂဇက်သဂျီး အယာတိုလာ မာမွတ်လျှာပွတ်ခိုမ်စီးသော ဘီအမ်ဒဗလျူ ဇိမ်ခံကျည်ကာ ကားနံပါတ်မှာ မ/၇၈၆ မှ Haj/786 ဖြစ်သွားဂျောင်း လမ်းပြပုလိပ်ဘဲဥမှ လက်ထောက်ချသည်။
၎င်းနှုတ်ထွက်စာတင်သည့် သတင်းမှာ နှုတ်မှထွက်စကား ပေထက်အက္ခရာ တင်ခြင်းအား နားစွန်နားဖျားကြား ပြောဂျင်းဟု ဗေဒင်နက္ခတ် တတ်ကျွမ်းသူ သမဒရုံးဝံဂျီး ဦးအောင်မင်း တုံ့ပြန်သည်။
နိုင်ငံတဂါ အလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာအား ရှမ်းပြည်နယ် ကြံ့ဖွတ်အစိုးရမှ ဂုံဒူးဇောင်ဆု ချီးမြှင့်လိုက်သော်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ မတရား အကျဉ်းချခံခဲ့ရသည့် ရှမ်းဂေါင်းဇေါင် ဦးခွန်ထွန်းဦးကိုမူ ထောင်ထွက်သဗုံ တဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
တောင်သူလယ်သမား အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေး အုပဒေကို လွှတ်တော် မတင်သွင်းမှီ တောင်သူလယ်သမား ကာကွယ်သည့် ဥပဒေ ထုတ်ပြန်သင့်ကြောင်း ၈၈မျိုးအဖွဲ့၏ ပြောဆိုမှုအား အခွင့်အရေး တောင်းဆိုသူများ မဖမ်းဆီးရေး ဥပဒေ အရင်ဆုံး ပြဌာန်းသင့်ဂျောင်း ဝေဖန်နေဂျသည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့မည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဒူးချွန်ကျောင်းသားများသာ ရွေးချယ်စီစစ် လက်ခံမည်ဖြစ်ရာ ကျောင်းသူများအား နောက်ခုံမှနေ၍ ဒူးချွန်ဖြင့် နှာဗူးကျ ထိုးသောကြောင့် ကျောင်းအထုတ် ခံရသူ ဆာဒူးဂျီးကပေ ကျောင်းပျံတက်ခွင့်ရဂျောင်း ကျောင်းသားရေးရာနှာထမှ အတည်ပြုသည်။
ဟိုတယ်အခန်းငှားခ အဆမတန် ဈေးမြင့်နေသဖြင့် တိုးရစ်ဧည့် လည်ပတ်မှု ကျဆင်းသွားမည်ကို စိုးရိမ်ဂျောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဖာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ယနေ့ထုတ်ဖော် ပြောကြားသည်။ မြန်မာ့ရိုးရာ လက်မှုတခုဖြစ်သော ဖာသေတ္တာငယ်များအား နိုင်ငံခြားသား နှစ်ခြိုက်ကြသည်။
တက္ကသိုလ် campus life တောင်းဆိုနေမှုများအား နှစ်သိမ့်သည့်အနေဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အင်းလျားကန် ကန်ပတ်လမ်းအား သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ပြင်ညာရေး မြှင့်တင်မှု ကော်မတီမှ ဆိုသည်။
စစ်မက်ဖြစ်ပွားရာ ဒေသများသို့ ပြင်ညာရေးဌာန ဆရာများ မသွားရောက်နိုင်သဖြင့် ခလေးငယ်များ ပညာရေး မလစ်ဟင်းစေရန် လိင်ပညာပေး သင်ခန်းစာ ပို့ချရေး ရုပ်ဝါဒီ လျှာပွတ်ခိုင်နှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ဖရိုင်းဘန်ဗူးတို့မှ တောင်းဆိုသည်။
ယူအက်စ် အစိုးရ အလိုရှိနေသည့် စီအိုင်အေ ထောက်လှမ်းရေးသ္မား စနိုးဒင်အား ကယ်တင်ရန် ရုရှားစပိုင်မယ် အင်နာချပ်မင်းမှ လက်ထပ်ချင်သည်ဟု တွစ်တာမှတဆင့် ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးနောက် မြန်မာစစ်တပ် ဝန်းရံခြင်း ခံနေရသော ဝသဗုံ ကြေးမုံဂျီးကို အာဝါဟ ဝိဝါဟ မင်ဂလာ ပြုဂျင်ဂျောင်း ဦးကြောင်ကြီး ဖေ့ဘွတ်တွင် ပရိုပို့စ် လုပ်သည်။
အစိုးမရနှင့် လွှတ်တော် အပြန်အလှန် ပြောဆိုနေမှုအား ဒီမိုကရေစီ လက္ခဏာအဖြစ် သတင်းထောက်များအား ပြောနေစဉ် ဒိန်းဂနဲ ကားဘီးပေါက်သံကြား၍ ဘွားဒေါ်ဂျီး ခုံအောက် ကပျာကယာ ဝပ်လိုက်ခြင်းမှာ အောက်ကျသွားသော ပိုက်ဆံ ကုန်းကောက်ခြင်းဟု သိရသည်။
မူဆယ် ရိုးမဘဏ်အား ဆက်ကြေးငွေ သိန်းတရာ တောင်းသည့်သတင်း မမှန်ကြောင်း ရှမ်းအက်စ်အက်စ်အေ တောင်ပိုင်းတပ်မှ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အပြန်လမ်းတွင် သတင်းထောက်များ စီးလာသည့်ကား ဓမြအတိုက်ခံရရာ ရှမ်းသတင်းထောက် နွေတီးတီးတယောက်သာ ချမ်းသာရာရဂျောင်း အံ့ဖွယ်သုတ ဖြစ်သည်။
သီတဂူ ဆရာတော် အရှင်ညာဏိဿရ ကြားဝင်စေ့စပ်မှုဖြင့် ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေနှင့် ဖားသားလန် ဆောက်လုပ်ရေး အချင်းများမှု ပြေလည်သွားရာ နှစ်ဖက်ရှေ့နေများ ရှင်းလင်းချက် ကြော်ငြာချောင်းနေသော ဂေဇက်သဂျီးဦးခိုမ် စီးပွားရေး ထိခိုက်သွား၍ ဘုန်းကြီးများ အမ်ဘီအေ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း တက်သင့်ဂျောင်း ပုတ်ခတ်လိုက်သည်။
သတင်းတွေက လည်း ဖလမ်းဖလမ်း ကို ထ နေတာပဲ
ရီ လိုက်ရတာ ဝက်ဝက်ကို ကွဲသွားတာပဲ
ရီသံတွေ တောင် အုန်းအုန်းကို ထ နေတာပဲ
ပလစ်တယ်လို့ တောင် ထင်ကုန်ကြတယ်
ဖာဈေးကောင် ဆိုလို့ …
ပြူးပြဲပြီး စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ပလိုက်ဒါ …
ဖာသေတ္တာ တွေကို ပေါဒါဗျဲ …
ငါးကြင်းတွေကောက ဟောလွန်းလို့ ပန်ကာဖွင့်ပီးဖတ်နေရတယ်ဒတ်
ကွန်းမန့်တွေ အီးမေးလ်ထဲ မဝင်ဗူးဗျို့… စပင်န်မေးလ်လည်း စစ်ပီးပီ… အဘိုဖစ်တနီး.. ဂေဇက် ဆရာများ…
ဒေါ့ကွန် ကို ပျောင်းပျောင်းဂျင်း ဂဒေါ့ …
ကွန်မန့်ဒွေ အီးမဲထဲ မဝင်ဘူး …
ဒီမနက် (ညန်မာစံဒေါ်ဂျိန်) က စလို့ …
အီးမဲထဲ ဝင်လာဗျန်ဒယ် …
လောလောဆယ် မဝင်ဗျန်တော့ဘူး …
ဘိုဖစ်နေမှန်းကို မသိတော့ဘာဘူး …
နောက်ကွယ်က လျှောက်ကလိနေဒယ် ထင်ဒယ် …
အာဝါဟဝိဝါဟပြုဂျင်ဂျောင်း ဦးကြောင်ကြီးမှ ကြေညာပြီးနောက်…
ဝသဗုံ အီတွန့်ဗွမ်မှ အာပီဂျီ ၁၀လုံးကို စိနပြည်မှလက်ခံရရှိထားသော…
ဖားသားလန်း ရဲ့ သိန်း၉ထောင်ကိစ္စကတော့ အံ့ဖွယ်ပါပေပဲ
နိုင်ဂရုဆိုတာလဲ သူ့ ဟာပဲလားမသိ
ကြောင်ကြီးရဲ့ လက်တစ်လုံးခြား သက်တင်းသင်တန်းသို့ တက်ရောက်မှတ်သားသွားပါကြောင်းးးး
အောင်မငီး …. ကိုယ်တွေတောင် မသိလိုက်ရပါလား ကွယ်ရို့
ဗာရာဘိုပါ အူးအူးကြောင် …
မူဆယ် ရိုးမဘဏ်အား ဆက်ကြေးငွေ သိန်းတရာ တောင်းသည့်သတင်း မမှန်ကြောင်း ရှမ်းအက်စ်အက်စ်အေ တောင်ပိုင်းတပ်မှ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အပြန်လမ်းတွင် သတင်းထောက်များ စီးလာသည့်ကား ဓမြအတိုက်ခံရရာ ရှမ်းသတင်းထောက် နွေတီးတီးတယောက်သာ ချမ်းသာရာရဂျောင်း အံ့ဖွယ်သုတ ဖြစ်သည်
နွေးတီးတီးက တယောက်ထည်း အသက်ရှင်တာ မဟုတ်ဖူး
နှစ်ယောက်ဗျို့ နှစ်ယောက် (ဗိုက်ထဲက ကလေး ဘယ်သွားထားတုန်း ကိုကိုကြောင်)